बुद्धको देशमा बुद्धकै खोजीमा कवि पण्डित
६६० पटक पढिएको
सिङ्गल आस्थाः तेतरपथ
मालिकको खेत खलिहान निफन्छिन्
मुसाको दुलो बढार्छिन् र
भरेको माड बटुल्छिन् ।
आली, कान्ला खनेर
दुलाबाट तिहुन झिक्छ मुसाको
दसैँ मान्छ साँझको ।
दिनभर जिन्दगीको बिस्कुन सुकाउँछु
बटुलेर रित्तो धर्छन, घर फर्किन्छु ।
आखिर माटो माटो न हो,
सुनै त जोख्न सकिन्न माटो ।“
आम नेपालीहरूको प्रतिनिधि पात्र तेतर सदाको माध्यमबाट कवि शिवनारायण पण्डितले जनजीवनको हरियो रङ्गमा परिरहेको गरिबीको छाँया र शोषणको प्रभावलाई छर्लङ्ग पारेका मात्र छैनन्, बरु आफ्नो लेखनको पक्षधरतालाई पनि स्पष्ट पारेका छन् । माटो, हिलो र पसिनामा डुबेको कर्मशील सत्यावतार तेतरपथ स्रष्टा पण्डितको कविताको दर्शन हो । तेतर सदा करोडौं श्रमजीवी नागरिकको प्रतिनिधि पात्र हो भने पण्डितको कलमी आस्था पसिनाको सम्मानमा हिमाल भएर उभिन्छ गर्वका साथ ।
२०१९ असोज ११ मा हाक्पारा, सुनसरीमा जन्मिएका कवि शिवनारायण सिङ्गलको लेखनस्वार्थ भनेकै सामाजिक जागरण र युगीन दायित्वको निर्वाह हो । कारी सुरुज उपन्यासलाई मैथिलीमा अनुवाद गरेर मातृभाषाको आराधना गर्दै साहित्ययात्राको औपचारिक यात्रामा बढेका स्रष्टा पण्डित नेपाली र मैथिली दुबै भाषामा सुन्दर कविताहरूको लेखन र वाचन दुबै कलामा अब्बल मानिन्छन् । हाम्रो समाजको वर्गीय संरचनाभित्र विभिन्न स्वरूपमा रहेका सम्पत्ति, जात, धर्म, लिङ्गजस्ता विभेदका आधारहरूमा चढेर मुस्कुराइरहेको सामाजिक असमानता र शोषणलाई समूल नष्ट नगरेसम्म निरीह वर्गका उज्याला दिन आउने छैनन् भन्ने विश्वासको इस्पातिलो आस्था बोकेका सर्जक सिङ्गलले शान्त, सुखी र समृद्ध नेपालको भविष्यप्रति आशावादी हुँदै विकृतिहरूमाथि कठोर प्रहार गरेका छन् कविताका माध्यमले । उनको लेखनधर्म न्यायपूर्ण आर्थिक वितरणमा रमाएको समतामूलक नेपाली समाज निर्माणको उद्देश्यमा विश्वस्त छ । त्यसैले उनको जीवनवादी चेतना विकृति र अँध्याराहरूप्रति कठोर तर उज्यालोप्रति आशावादी देखिन्छ ।
बुद्धको देशमा बुद्ध ः यो जोसँग सम्बद्ध छ
हामी अलि बढी हल्लाका चल्ला बनेका छौं । आफैँमा बिना छ भन्ने थाहै नपाएका कस्तूरी हामी । बुद्धभूमिमा कुहिरीमण्डल बारुद–बादलभित्र रगतको होली खेलेर हत्तुहैरान हाम्रा शिथिल भएका छन् खुट्टाहरू । लुम्बिनीको शिविरबाट विश्वका कोमल मनहरूले सुन्ने गरेर कराउँदा पनि मेरो बुद्ध बेलाबेला तल, माथि, पर, वर सर्न खोज्छ । म बुद्धकै जन्मघरबाट विश्वभरि आर्यसत्यको शीतल शान्तिसन्देश व्याप्त बनाउन चाहन्छु, तर मेरै पाइताला रगतका डोबमा दारुण मानवचिन्ह बनाउँदै करुणाको गाढा भाव तप्प तप्प चुहाइदिन्छ हरपल । बस् स्रष्टा सिङ्गलभित्रको अहम् भन्नू बुद्धवादी जीवनमाथि हिँस्रक मानवप्रकृतिको बलात्कारले आहत छ, उनी आफैँभित्र बुद्ध बोकेर बुद्धको खोजमा निस्कने आजको नेपाली समाजको भ्रम चिर्न चाहन्छन् प्रत्येकजसो कवितामा ।
कवि सिङ्गलका कविताको पेटबोली
मैले हरेक कविताहरूको सन्देश, प्रेरणा र मूलबोलीलाई अथ्र्याएर प्रिय पाठकको कुमारी–जिज्ञासामाथि हस्तक्षेप गर्न चाहिनँ । यत्ति चाहिँ सत्य हो कि पहिलो कविताकृति भएकोले कवि सिङ्गलका यस सङ्ग्रहका कविताहरू आफैंमा उनका सिर्जनप्रवृत्तिको सङ्केत गरिरहेछन् । सूत्रात्मक रूपमा उनका कविताको अन्तर्यलाई यसरी राख्न सकिन्छ,—
१. जीवनवादी चेतना
२. शान्त, समतामूलक र समृद्ध समाजको सपना
३. सबैखाले विकृतिहरूमाथि चट्कन
४. धर्तीसन्तति श्रमका पुजारीहरूको पक्षधरता
५. जात, धर्म, वर्ण र लिङ्गपरक सामाजिक विभेदको सातो बोलाउने कलम
६. सरल शैलीमा गहन विचारको कलापूर्ण सम्प्रेषणको क्षमता
७. अर्गानिक बिम्बः अर्गानिक कला
८. मौलिक जीवनको शीतल छाँया
९. वर्तमानमाथि खबरदारीः भविष्यमाथि भरोसा
१०. सामाजिक जागरणको काव्यिक शङ्खघोष
स्रष्टाको स्वकीय सृजनसन्दृष्टि
मैले प्रस्तुत कविताकृतिकै समीक्षाको मियोमा स्वयं स्रष्टा पण्डितले द्रष्टाको भूमिकामा उभिएर आजको समाज, परिवेश साहित्य र मूलतः सर्जकहरूको दायित्वका सवालहरूमा गम्भीर चिन्तनका साथ दिएको आक्षरिक प्रवचनलाई प्रेरक सन्दर्भ ठानेको छु । बुद्धको देशमा बुद्धकै खोजीमा निस्किएका स्रष्टा पण्डितका कवितामाथिको वस्तुगत विहङ्गावलोकनलाई उनकै शब्दमालाले सजाउने प्रयत्न गरौं,
वास्तवमा साहित्य के रहेछ स्रष्टा ?
मेरो विचारमा संक्षेपमा भन्ने हो भने, जीवन र जगतको प्रतिबिम्बलाई यथार्थ अनुभूतिहरूका माध्यमले गरिने कलात्मक अभिव्यक्ति नै साहित्य हो । समाज रूपान्तरणको लागि शोषित, पीडित, महिला, दलितजस्ता मानवका पीडाको यथार्थ चित्रण एवं आफ्नो हक, हित र कर्तव्यप्रति जन–जनलाई सदा सजग र चेतनशील गराउने सहज तर बौद्धिक अभिव्यक्ति साहित्य हो । त्यसैले साहित्यलाई समाजको ऐना भनिन्छ ।
सृजनाको प्रयोजनमाथि यहाँको धारणा ?
कला केवल कलाको लागि हुनुहुँदैन, त्यसमा समय, अवस्था, परिवेश र परिवर्तनका सन्देश पनि हुनु आवश्यक छ । कलाले जीवनलाई कलात्मक दिशा दिन सकोस् । जसरी जीवन जिउन कला चाहिन्छ त्यसरी नै कलामा जीवनसम्बद्ध सन्देश जरुरी छ ।
कवि सिङ्गलका सिर्जनाहरूको सानो फेहरिस्त पाऊँ न !
मूलतः गद्य विधामा कविता (नेपाली, मैथिली र थोरै हिन्दी), विसङ्गति र विकृतिका विरुद्ध स्वतन्त्र लेखन, निबन्ध थोरै, मुक्तक र गीत हाइकू । नाटक, उपन्यास ।
बहुभाषाका सृजनशिल्पी भनौं है त ?
नेपाली, मैथिली र हिन्दीमा अनुवादलेखन । केही कथाहरू छन् । धेरै कविता र आलेखहरू नेपाली भाषामा ।
सिर्जनाको साधनालाई समयले मापन गरौं न स्रष्टा !
करिब २०४० सालदेखि लेखन सुरू भएको हो । तर ०४२ देखि छापिएको हो । प्रारम्भमा कति सिर्जना हराएका पनि हुन् । मैथिलीमा साठीको दशकदेखि हो लेखनको आरम्भ ।
किन कवि हुनुभयो ? प्रेरणा र निरन्तरताबारे केही जानौं न कविजी !
केही बाध्यता र परिस्थितिले प्राप्त पीडा, एकांकीपनको निरसताले उत्पन्न चिन्ता आदिले मनमा कुराहरू खेल्थे, तर म चाहिँ चिन्ता लिनुभन्दा भुल्न चाहन्थें र स्वस्फूरण हुन्थ्यो र लेख्थें । पीर भुल्नकै लागि पनि म हिन्दी उपन्यासहरू पढ्थें । कोठामा बसेर आर्ट पनि बनाउँथे र पछि ०४० सालतिर मनमा उठेका भावलाई कवितामा कोर्न थालें । कति कविता हुन्थे त कति लामै लेख हुन्थे । म प्रेसको कम्पोजिटर पनि भएकोले लोकल पत्रिकाहरूमा कविता छाप्न थालियो । बहस, तेस्रो विश्व, आरसी, संसार आदिमा छापिन्थ्यो ।
डाइमन शम्शेरको सेतो बाघ, शिरीषको फूल मेरो रोजाइका पुस्तकहरू थिए । अरू पनि पढ्थें । पछि साझा कविता पढें ।
कति भाषामा भावनालाई कवितावतार दिन सक्नुहुन्छ ?
मातृभाषा मैथिली, राष्ट्रभाषा नेपाली र राष्ट्रिय भाषामा ’अंगिका’, अवधी, थारू अन्यमा हिन्दी, थोरै अंग्रेजी । यी सबै भाषा मेरा भावनाका नौका खियाउने नदी बनिरहेका छन् ।
किन लेख्ने कविता ? अभावमा बाँच्न प्रेरित गर्ने सृजनाको शक्तिमा यति धेरै विश्वास किन ?
किन लेख्छु –को सवालमाः मेरो जीवन आज पर्यन्त संघर्षपूर्ण रहेकोले जीवनलाई बहुत नजिकबाट चिन्दै बुँझ्दै र गम्दै आएको छु । अर्कातिर समाजका अरू कैयन मानिसलाई पनि मभन्दा कम दुःखी देखिनँ र लाग्यो —आखिर मानिस दुःखी किन छन् ? र मैले हेरें, समाजमा व्याप्त कुरीति, अन्धविश्वास, परम्परा, रूढिवादिता र यसको कारण अज्ञानता र अशिक्षा हो । यसले मानिसमा लालच पैदा गरेको छ । काम, क्रोध, मोह र अहङ्कार पैदा गरेको छ । नतिजास्वरूप मानिसमा स्वार्थ मौलायो । बलात् छिनाझपटी, हठात् घातप्रतिघात, आदि नाना प्रकारका विकृतिहरू समाजमा व्याप्त भए । सबैको अमन चैन हरायो । सबै स्वतन्त्रभन्दा परतन्त्र भई जिइरहेका छन् । र, सुखी भन्दा दुःखी छन् सबै ।
यसरी दुनियाँको दुःख हेर्दा झन् दुःख लाग्थ्यो र जनजागृति र जनचेतनाका उपायहरू फुर्थ्यो र कलम चल्थ्यो । यसरी लेख्दै गर्दा मेरो आफ्नै दुःखपीर कम भएझैं लाग्थ्यो र समाजमा व्याप्त विसङ्गति र विकृतिका विरुद्ध, सामाजिक उत्थानका निमित्त उन्नति प्रगति र सोको लागि एकता र समानता चाहिन्छ अनि मात्र शान्ति र विकास सम्भव हुन्छ भन्ने कुराहरू खेल्न थालेपछि मैले मेरा कुराभन्दा पनि सामाजिक जीवन उकास्ने र परिवर्तनका कुराहरू नै फुर्न थाल्यो र लेखिरहेछु केवल अरूको लागि । सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि ।
अब कस्तो साहित्य अपरिहार्य छ ? कस्ता कविता आवश्यक छन् त ?
नेपाली समाज सदा संघर्षपूर्ण जीवन भोग्दै आएको अवस्था छ । मुक्तिको किनारमै बसेर पनि मुक्तिको लागि पलपल तड्पिरहेको अवस्था छ । यद्यपि साहित्यले नै हो ठूलो भरथेग गरेको जस्तो लाग्छ । साहित्यले नै हो समाजमा परिवर्तनका सम्भावनाहरूलाई सहज बनाइदिने उपाय प्रदान गरेको छ । व्यक्ति–व्यक्तिलाई सिर्जनशील बनाउँदै लगेको छ । यसरी व्यक्ति सिर्जनशील, कर्मठ र इमानदार भए देश पनि समृद्धिको शिखर चुम्न सक्छ । आजको नेपाल यहाँसम्म आउनुमा शिक्षा र साहित्यको अहम् भूमिका छ । यद्यपि पुरातन जडवादी साहित्य पनि नरहेको होइन तर वैज्ञानिक युगमा आध्यात्मवादी साहित्यभन्दा भौतिकवादी साहित्यले परिवर्तनका सम्भावनालाई साकार बनाउन सक्छ । अतः नेपालमा नेपाल र नेपालीको जीवनस्तरलाई दिशा दिन समयानुकूल साहित्यिक सिर्जना आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
साहित्यमा राजनीतिबारे यहाँको नजर ?
राजनीति साहित्य र फलता । यस सवालमा मेरो बुझाइअनुसार राजनीति र साहित्यबीच ठूलो भिन्नता छ । राजनीतिले समाज फोड्ने काम गर्छ भने साहित्यले जोड्ने काम गर्छ । राजनीतिले नागरिकको श्रमको कुरा गरेर धनदोहन गर्छ भने साहित्यले मानव, मन र मष्तिष्कसँग सरोकार राख्छ । मनमा सबलता, ऊर्जा र उत्प्रेरणा जगाउने काम साहित्यले गर्दछ । यद्यपि जीवनको लागि धन र मन दुईटै चाहिने भएकाले दुवै आवश्यक छ । तथापि राजनीति साहित्यबाट प्रेरित हुनुपर्छ न कि साहित्य राजनीतिबाट । यदि साहित्य राजनीतिबाट प्रेरित हुनगयो भने परिवर्तनको नाममा ज्ञानभन्दा द्वन्द्वले प्रश्रय पाउँछ जो खतरनाक हो ।
कविता कस्तो होस् ?
कविता थोरै शब्दमा धेरै कुरा बोल्ने विधा भएकोले बिम्ब, अलङ्कारको समुचित प्रयोग आवश्यक छ ।
बुद्धकै देशमा बुद्ध खोज्नुको औचित्य र सार्थकताबारे यहाँको धारणा ?
यदि समाजलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्ने हो भने समाजमा व्याप्त कुरीति, कुसँस्कार र जडतालाई हटाउनै पर्छ । समानताको आधार टेक्नै पर्छ । मानिसको दुःखको कारण गरीबी र अशिक्षालाई अन्त्य गर्नै पर्छ । मानिसमा दया, क्षमा र सहयोगको भावना जागृत हुनैपर्छ । हिंसाले हो मानिसलाई मानिसदेखि दूर गरिरहेको छ । मानिसले जात, भात, रंग, वर्ण आदिको भेदभाव छोडेर एकआपसमा प्रेम गर्न सक्नुपर्छ । यसको लागि ज्ञान आवश्यक छ । र, ज्ञान प्राप्त गर्न पनि त्याग चाहिन्छ, सकारात्मक क्रान्ति चाहिन्छ । बुद्ध त्यागी थिए, क्रान्तिकारी थिए । बुद्धका उपदेशहरू मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र जीवनोपयोगी भएकोले बुद्धका उपदेशहरू शतप्रतिशत शान्ति, सद्भाव र विकासका सम्वाहक हुन् । यसविना शान्ति सम्भव छैन । बुद्धको यिनै विचारहरूबाट प्रेरित मैले मेरो सिर्जनामा शान्तिका अग्रदूत बुद्धलाई आधार मानेको हुनुपर्छ । मैले मेरो जीवनमा प्राप्त अनुभवले पनि शान्तिमा सम्पन्नता हेरेको हुनाले म आफू दुःखी भए पनि अरूको सम्पन्नता चाहन्छु र बुद्धलाई सम्झिरहन्छु । त्यही भएर होला मेरो सिर्जनामा बुद्ध आएको हुनुपर्छ ।
सिर्जनासँग जीवनको सम्बन्धबारे यहाँको सम्बोधन ?
जीवन स्वयम् एक सिर्जना हो । जसलाई मानिसले मानिस हुनुको अहम्मा बिर्सिएको अवस्था छ । जन्म र मृत्यु पञ्चतत्वझैं परम् सत्य भएकोले जन्म र मृत्युको बीचमा जीवन हुन्छ । जीवन जिउन पनि कला चाहिन्छ । कला पनि सिर्जना हो । यसर्थ जीवन र सिर्जनाको साइनो हाड र छाला जस्तो, नङ र मासुजस्तो अनि मुटु र धड्कन जस्तो छ, जस्तो मलाई लाग्छ ।
बस्, स्रष्टा शिवनारायणजीको पूर्वाेक्त आत्मस्वीकृतिबाट हामी एउटा सबल सर्जकको सामाजिक उत्तरदायित्व र सृजनाको तागतबारे स्पष्ट भइसकेका छौं । काव्यिक प्रयाण सुखद र सफल बनोस् स्रष्टा पण्डितको, शुभाशंसा । अब हामी सबै पाठकका औत्सुक्य मेट्ने कवि सिङ्गलका कविता हाजिर छन् बुद्धको देशमा बुद्ध ः हामी पनि कविसँगै बुद्धको खोजमा लाग्ने कि !